isilwanyana sokutya se-pellet siyathengiswa,umatshini wokuxhela wokutya we-pellet wokugaya ubonakalisiwe
Amandla:3~ 4kw,isigaba esinye okanye izigaba ezithathu
Uhlobo lwamandla:umbane,Injini yedizili okanye injini yepetrol
Umthamo:100~ I-150kg / h
umatshini wokutya izilwanyana luhlobo lokungxengxeza lwenzelwa into yokwenza izilwanyana zokutyisa izilwanyana, amadada, iinkukhu kunye nolunye uhlobo lwenkukhu. Lo matshini we-feed pellet wenziwa ngokusekwe yoyilo lwesakhiwo sokukhala. Ukuba ufuna ukwenza ipellets ezinobungakanani obuphakathi ukuya kobukhulu bokutya, I-ring die feed pellet mill lukhetho olufanelekileyo.
Izilwanyana zityisa i-pellet isetyenziswa kakhulu ngabantu abazala inkukhu, umvundla, inkomo, igusha, iinkomo, yehagu, kwaye nangokunjalo. Isizathu sokuba benze iipellets zokutya kukuba iipellets ngumdibaniso olungeleleyo weentlobo ezahlukeneyo zesondlo ekukhuleni okungcono kwemfuyo, iinkukhu kunye nezinye izilwanyana.
Izinto eziluhlaza kumatshini wokutyisa izilwanyana:
Izinto eziluhlaza kwesi sondlo semveliso yokutyisa izilwanyana zingangumbona / umbona, alfalfa, ingqolowa, ingca, irayisi, iimbotyi, ikhekhe leoli, njl. Ngokwesiqhelo, Izinto ezinkulu ezingafunekiyo kufuneka zirhwetywe ngesando semitha. Iprotein okanye ezinye izakha-mzimba nazo zingongezwa kumgubo okrwada.
Isicelo sesondlo sePellet Mill yeZilwanyana
* umgubo wokutya wezilwanyana zilungele ukuqhubekeka ngeendlela ezahlukeneyo zokutya okuziinkozo kwiipellets ezincinci zokutya kwizilwanyana ezifana neenkomo, inkomo, inkukhu, umvundla, yehagu, njl.
* Lo matshini wokutya izilwanyana ulungele ukwenza iibhedi zeebhedi zezilwanyana kwiindawo zekhadibhodi.
* Ikwalungele ukusetwa kwezinto ze-biomass kunye nezinye izinto ezininzi ezinkunkuma kwiipelethi zokhuni ngepetroli eluhlaza.
Iimpawu ze-Aniaml feed zePellet Mill
Inendleko eziphantsi zokuvelisa: Umatshini wokutya wezilwanyana wepellet awudingi ukuba abantu abaninzi basebenze. Inyaniso, umatshini wokutya wezilwanyana ufuna umntu omnye okanye ababini ukuba bawusebenzise. Oku kunciphisa kakhulu iindleko zabasebenzi ezichaphazela ubukhulu becala indleko zemveliso. Ixabiso eliphantsi lemveliso lakhokelela ekunyukeni kwimarida yenzuzo.
Iindleko zokunciphisa ezincitshisiweyo: Umatshini wokutya i-pellet mill zilula kwaye zincinci ngenxa yoko kulula ukuzithenga nokuzifaka. Udinga nje imizuzu embalwa yokudibanisa iinxalenye ezahlukeneyo. Oku kunciphisa inani lemali efunekayo ukubiza abasebenzi abafanelekileyo ukuba bayihlanganise. Udinga kuphela umntu ofanelekileyo nomnye ukuze umncede.
Ngumatshini otya imali ophantsi: Ngenxa yobukhulu bayo obuncinci, umatshini wokutya wezilwanyana wepellet ufuna indawo encinci. Oku kunciphisa iindleko zokuqesha indawo enkulu yokuyifaka kunye nexesha elifunekayo lokuyifaka.
Inesicelo esibanzi: Umatshini wokutyisa izilwanyana zenzelwa ukuba kuveliswe ubungakanani obahlukileyo beepellethi zeenkukhu ezahlukeneyo kunye nemfuyo. Oku kuthetha ukuba ungondla zonke izilwanyana zakho usebenzisa umatshini omnye ngaxeshanye. Kwenze kwalula kubalimi ukukhulisa iintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana kwiifama zabo.
Ipharamitha yezobuchwepheshe zeeMoney Pellet ezincinci
Umboniso we-pellet yokugaya